Uncategorized Archives - Araniko Times
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल बैशाख ११ गते शनिबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल २४ तारीख चैत्र शुक्लपक्ष द्वादशी तिथी उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र धु्रव योग कौलव करण चन्द्रमां सिंह राशिमा प्रातः ८ः५३ बजे सम्म पश्चात कन्या राशिमा आनन्दादि योगमा उत्पात योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं बसन्त ऋतु शनिप्रदोषव्रत,लोकतन्त्रदिवस ( ज्यो.प.सरोज घिमिरे मेष राशि (चु, चे, चो, […]
रोयल इन्फिल्डको नयाँ मोटरसाइकल मेटोर ३५० नेपाल आउदै, यस्तो छ मुल्य
क्लासिक मोटरसाइकलको लेजेण्ड ब्राण्ड मानिदै आएको रोयल इनफिल्डको नया मोटरसाइकल मेटोर ३५० नेपाल आउने भएको छ । भारतमा निक्कै सफल भएको यस मोडल अन्तत नेपाल आउने पक्कापक्की भएको हो । मेटोर ३५० ले ‘इन्डियन मोटरसाइकल अफ दि इयर’, सिएनवीसी अवार्ड, इन्डियन मोविलिटी अवार्ड, अटोकार अवार्ड जस्ता अधिकांश अवार्ड जितिसकेको छ । नेपालका लागि रोयल इन्फिल्डको […]
रमेश गिरी । नयाँ वर्षको अवसरमा मध्यपुरथिमि नगरपालिकाले चार दिन सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नयाँ वर्षमा यहाँ मनाइने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व बोकेको बिस्काः अर्थात् बिस्केट जात्रा स्थानीयवासीले आजदेखि भव्यरूपमा मनाउने भएपछि नगरपालिकाले पहिलोपटक चार दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले विगतका वर्षहरुमा वैशाख १ गते नयाँ वर्षको अवसरमा मात्रै बिदा […]
मेष (चु.चे.चो.ला.लि.लु.ले.लो.अ.)-मेष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिनामा अल्लि बढी दौडधुप पर्नेछ । र पनि केही उपलब्धि एवं व्यवसायिक लाभ हातपार्न सकिने छ । वृष (इ.उ.ए.ओ.वा.वि.वु.वे.वो.)-वृष राशि हुने व्यक्तिको लागि यो महिना अल्लि संघर्षकर देखिएको छ । रपनि महिनाको शुरु र तेस्रो हप्तामा उपलब्धि एवं सफलता मिल्ने छ । मिथुन (का.कि.कु.घ.ङ.छ.के.को.ह)-मिथुन राशि हुने व्यक्तिको लागि […]
हस्तरेखा शास्त्रका अनुसार हातको रेखाले व्यक्तिको जीवनमा आउने उतार-चढावको बारेमा बताउँछ। त्यस्तै, हातको शुभ संकेतहरूले व्यक्तिको जीवनमा सुख, धन, धन आदिको योगको बारेमा थाहा हुन्छ। हस्त रेखामा स्वास्तिक, शंख, चक्र, कमल जस्ता संकेतको महत्त्व जान्नुहोस्। शंख हिन्दू धर्ममा शंखलाई धेरै पवित्र मानिन्छ। शंख धेरै देवीदेवताहरूको हातमा पनि देखिन्छ, तर मुख्यतया यो भगवान विष्णुको हो। शंख […]
होसियार ! कहिल्यै नखानुहोस् यी रोग भएका मानिसले कागती
एजेन्सी । स्वास्थ्यका हिसाबमा कागती पानीको प्रयोगलाई निकै राम्रो मानिन्छ । कागती वजन कम गर्न मात्र नभएर छालाको हेरचाहको लागि पनि काम आउँछ । यसको नियमित सेवनले वजन कम गर्न देखि अन्य समस्यालाई नियन्त्रण गर्न सघाउँ पुर्‍याउँछ। त्यस्तै छालाका समस्या भएकाहरुले पनि कागतीको प्रयोग गर्दा फाइदा पुग्छ । तर सबैलाई भने कागती पानीले फाइदा पुग्दैन […]
भाइरल चियावालिको पहिलो भिडियो नै बिवादमा ,पत्रकारकै अगाडि घम्साघम्सि (हेर्नुस् भिडियो )
अहिले चियावालीको उपनामले सामाजिक संजालमा निकै नै भाइरल बनेकी नुवाकोटकी सृष्टि तामाङ जो आफ्नो दुई वर्षको आफ्नो दुधे बालकलाई आफ्नो पिठ्युँमा बोकेर रातको तीन बजेदेखि चिया बनाउँदै र बेच्दै आउनुभएको छ। उहाँको संघर्षको यो दृश्यलाई गोदावरीका एकजना फोटो पत्रकार गजेन्द्र राज नेम्बाङले सामाजिक संजालमार्फत सेयर गर्नुभयो र यो दृश्य यतिबेला संसारभर भाइरल बन्न पुग्यो। सामान्य […]
‘शिक्षण संस्था ब’न्द भए पनि परीक्षा रोकिँदैन’ – शिक्षा मन्त्रालय
काठमाडौं : सरकारले देशभरका सबै शैक्षिक संस्था चार दिनसम्म ब’न्द गर्ने निर्णय गरे पनि परीक्षा भने नरोकिने भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै वायु प्रदूषणका कारण भन्दै चार दिन शैक्षिक संस्था ब’न्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर मंगलबारबाट वातावरण […]
काठमाण्डौंको नयाँ बसपार्कमा ट्याक्सी चालक र पठाओ राइडरबिच विवाद भएको छ । ट्याक्सी चालकहरुले बसपार्क क्षेत्रमा पठाओ राइडरको बिरोध गर्दै ट्याक्सी जुलुस नै निकालेका थिए । सोहि क्रममा पठाओ राइडर तथा ट्याक्सी चालक बीच विवाद भइ झ ड प समेत भएको थियो । पछिल्लो समय ट्याक्सी चालकहरुले पठाओ राइडरहरुसँग निहुँ खोज्ने, झ ग डा गर्न […]
९१ बर्षीय बाजेका ३ ओटी श्रीमती, बाजेको निकै चाख-लाग्दो कथा (भिडियो सहित)
९१ वर्षका बृद्ध हजुरबुवा । जस्ले तीन वटी श्रीम ती बिहे गरेका रहेछन् । त्यो पनि मागेर झ्याँई झ्याँई बाजा बजाएरै बिहे गरे’का रहेछन् । उनका कुरा सुन्दा किताबमा लेखि’एका कथा जस्तै लाग्ने । पर्वत जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा बस्छन् उनी । उनले तीन वटी बिहे गरेप’नि हाल उनी जेठी र कान्छि गरी दुई वटी श्रीम’तीसंग […]